I-cosmetic Dentistry Sea point - Odokotela bamazinyo baseKapa, ​​Isilinganiso Esiphakeme Kakhulu se-Google, Isevisi Yokuzitika
Isebenza Kanjani I-ABC?
Funda mayelana nokuqondanisa amazinyo nokuqondanisa okucacile okuphumelele kakhulu emhlabeni, i-Invisalign. Amandla akhanyayo e-OptiSmile WOW! Ukwenziwa mhlophe kanye ne-cosmetic wizardry yokubopha okuyinhlanganisela okubuyisela amazinyo ezingeni lobuhle obutholwa odokotela bamazinyo abanekhono kakhulu.
Yiziphi izinqubo ezisetshenziswayo?
Singena sijula ​​endaweni ngayinye kanye nemikhiqizo esetshenziswa ne-flagship cosmetic treatment ebizwa nge-ABC. I-OptiSmile ivuma futhi isebenzisa kuphela imikhiqizo yamazinyo ehamba phambili etholakalayo njengamanje. Ukwelapha iziguli zethu ngezinga lokunakekelwa okubekelwe abasebukhosini yindlela esibhekana ngayo necala ngalinye.
Imiphumela yokumamatheka kwe-ABC emangalisayo!
Imiphumela ihlale ihluka ngokuya ngecala ngalinye kanye nezidingo zesiguli ngasinye futhi icala ngalinye libona imiphumela eyimpumelelo eshintsha impilo yeziguli zethu. Imigomo yakho yamazinyo iba yimigomo yethu yamazinyo futhi siyaqinisekisa ukuthi ukumamatheka kwephupho lakho kuba ngokoqobo.
Izindleko zenqubo ye-ABC?
Ukutshala imali ekumamathekeni kwakho kuwukutshalwa kwezimali isikhathi eside okunemiphumela emihle kuyo yonke indawo yempilo yakho. Ukuzethemba okuvuselelwe kanye nokuzethemba kunemiphumela ejulile kukho kokubili umsebenzi wakho kanye nempilo yakho siqu njengoba ikhwalithi yobudlelwano kuzo zombili lezi zindawo ikhula kakhulu.
Kuyini Ukwelashwa kwe-OptiSmile's ABC?
I-ABC ka-OptiSmile iyisinyathelo esi-3 sokubuyisela ukumamatheka kwakho ngokuphelele nangokuzethemba. Amazinyo angahambelani kahle, aqhekekile, alahlekile noma abolile anganciphisa kakhulu ukuzethemba kwakho. Kuhlala kusengqondweni yakho. Ingcindezi nokukhathala kokuhlala uzizwa ungavikelekile mayelana nokumomotheka kwakho into ongayidingi ukuze ungene enkathini yehlobo elindelwe kakhulu.
Ukumamatheka okuqinisekayo, okuhle kunamathuba angama-40% anyuswe ukukusiza ukuthi uthole lowo msebenzi wamaphupho.
Cishe u-60% wamathuba okuthola usuku nozakwenu wamaphupho
Amathuba angu-75% amangalisayo okukhulisa ukuzethemba kwakho kuze kufike emazingeni lapho ungumuntu omusha ongagonyelwe ukuzethemba okuphansi
Ukumamatheka okwaziyo ukuthi akufanelanga indlela yokuphila ekufanele.
Nge-OptiSmile nohlelo lwethu lwe-ABC, siyaqinisekisa ukuthi sizoba sekhoneni lakho ngaso sonke isikhathi futhi sikusize uklame ukumamatheka kwamaphupho akho. Sinikeza ukubonisana kwevidiyo kwamahhala lapho sixoxa ngakho konke nawe kabanzi kanye nemigomo yakho yamazinyo. Sizokusiza ukuthi wakhe uhlelo lokuzuza ukumamatheka obulokhu ukufisa. Kulula njenge-ABC.
Amandla eskena se-Itero Element
Ngesikhathi sokubonisana kwakho okokuqala uHarris uzoskena umlomo wakho ngesithwebuli sethu esinamandla se-iTero futhi kungakapheli mizuzu uzobe usunesisombululo se-hi-resolution se-3D samazinyo akho uwabuka ngokucacile okuphelele.
Lesi sithwebuli esikhethekile sikhiqiza ukuskena kwamazinyo akho ngokunemba kwe-micron futhi lokhu kulayishwa nge-portal ekhethekile yodokotela ngqo ku-Invisalign e-USA. Lapho uHarris esejabule ngohlelo olungase lube khona kanye nezinga lokuqondisa okudingekayo ukuskena kwakho kuzolayishwa ngesithwebuli uqobo ku-IDS Invisalign Doctor Site futhi izinto ziqala ukwenzeka ngemuva kwezigcawu lapho ochwepheshe abaqeqeshwe kakhulu nabaqeqeshiwe be-Invisalign e-USA beqala ukuqondisa amazinyo akho asebenzisa i-software ye-Invisalign enelungelo lobunikazi.
Ngesikhathi sokuvakasha kwakho okokuqala uzokwazi ukubona ukunikezwa kokubukeka kokumamatheka kwakho okusha ukuze ubone imiphumela yakho yesikhathi esizayo ezokwakhiwa ezinyangeni ezizayo.
Iziguli zethu zizwa ikusasa lodokotela bamazinyo abasezingeni eliphakeme ngendlela engakaze ibonwe njengoba lesi sithwebuli samandla sibonisa amandla wokuqondanisa we-Invisalign kanye nokuveza yonke indawo enezinkinga emlonyeni wakho njengoba sihlakulela uhlelo lwakho olwenzelwe ukuqondisa ukumamatheka kwakho.
Ukumamatheka okukhanyayo kukhanyisa igumbi!
Odokotela bamazinyo yiwona kuphela umsebenzi eNingizimu Afrika ovunyelwe ukunquma ukwenziwa mhlophe kwamazinyo okuqukethe i-peroxide.
WOW OptiSmile! Isixazululo esimhlophe sisekelwe kwisayensi hhayi ekuthengiseni.
Umsebenzi wethu siwuqonda ngokuzethemba ukuthi izindlela esizisebenzisayo ukwenza amazinyo abe mhlophe ziyasebenza futhi ziphephile ezigulini zethu.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongenacala ongenalo ilungelo lokuzigcina ehlanzekile abe esezimele uma ukubhaliswa kwakhe kwe-HPCSA kuthathwa ngokuthi “kugadiwe”. Udokotela wamazinyo kufanele ahlole amazinyo akho ngaphambi kokukunikeza ama-ejenti we-bleaching.
Ukwenza mhlophe ngobungcweti kusetshenziswa amathreyi enziwe ngendlela ayindlela engcono kakhulu yokuqalisa. Le nketho idinga i-aphoyintimenti nge-OptiSmile WOW! udokotela wamazinyo ukwenza ngokwezifiso uhlelo lokufaka amakholomu ukuze luvumelane wena namazinyo akho.
I-Mobile Teeth Whitening ne-Opalescence GO!
I-Opalescence Go ingenye yezindlela zochwepheshe zokukhetha ukumhlophe okungaphezu kwekhawunta. Kuyindlela elula, esheshayo, futhi emnandi kakhulu yokuqala ukwelapha okumhlophe noma ukuthinta kube mhlophe. Ngaphandle kokuvelayo noma amathreyi angokwezifiso adingekayo, i-Opalescence Go isilungele ukusetshenziswa khona kanye ngaphandle kwephakheji!
I-Opalescence tooth whitening gel iqukethe i-PF (i-potassium nitrate ne-fluoride), esiza ukugcina impilo yoqweqwe lwawo ngesikhathi sokwenza mhlophe.
Akukho okuvelayo okudingekayo, awekho amamodeli futhi asikho isikhathi selebhu! Izigcini ezithambile nezinethezekile zijwayelana nanoma yikuphi ukumamatheka. Izinto zethreyi ezihlakaniphile, ezicacile ezisebenza ngesikhathi sokurekhoda uma zihlanganiswe nohlu lwe-Opalescence lwejeli emhlophe yamazinyo.
Ijeli engu-10% - Igqokwa imizuzu engama-30 kuye kwengama-60 cishe izinsuku ezinhlanu kuya kweziyi-5.
Ijeli engu-15% - Igqokwa imizuzu engama-15 kuye kwengama-20 cishe izinsuku ezinhlanu kuya kweziyi-5.
Itholakala kukho kokubili ukunambitheka kwe-mint ne-melon.
Ngingathanda ukufunda okwengeziwe ngamanani entengo
Indlela ka-OptiSmile`s kuma-veneers ahlanganisiwe.
Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe kuyindlela yesimanje yokubuyisa amazinyo, kungaba ngezizathu zezimonyo, noma ukwakha isakhiwo sezinyo esilahlekile.
Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe yisigaba sesi-3 ngaphakathi kokwelapha i-ABC okukhombisa imiphumela emangazayo yokulungisa amazinyo nganoma yiziphi izinkinga zezimonyo noma zesakhiwo.
Ngokuzethemba sibuyisa amazinyo abolile, awonakele noma alahliwe sisebenzisa i-resin yamazinyo efakwa ebusweni bezinyo elibuyisa ukubukeka kwalo kwemvelo, okunempilo, ukubopha okuhlanganisiwe noma ukubunjwa komjovo kunika iziguli zethu ukumamatheka ebikade ziphupha ngakho njalo.
Njengezinye izinhlobo zama-veneers wamazinyo, i-Laminated Composite Veneers nayo iyakwazi ukubhekana nezinkinga eziningi zamazinyo ngasikhathi sinye. Zingasetshenziswa ukwelapha ukushintsha kwamazinyo, amazinyo angaqondile noma agwegwile, amazinyo aqhephukile noma aphukile, kanye nezikhala phakathi kwamazinyo akho.
Inzuzo eyodwa enkulu oyithokozelayo ngokukhetha lolu hlobo lwama-veneers wamazinyo ukusebenza kahle. Yonke inqubo ivele ikuthathele i-aphoyintimenti eyodwa ehlala amahora amathathu kuya kwama-3 esihlalweni samazinyo.
Esikhathini nje samahora, ungaba nokumamatheka okusha okuthuthukisiwe kalula. Futhi, ukwelashwa akunaso isikhathi sokuphumula. Uma inqubo isiqedile, usuyohamba kahle. Empeleni ungonga isikhathi esiningi ngokuba ne-Laminated Composite Veneers.
Ukwelashwa Kwamazinyo Okuthuthukisiwe Kwesenzo
Amazinyo amahle, wemvelo futhi abukeka enempilo!
Kusetshenziswa inqubo yokubumba umjovo, ukubuyiselwa okuyinhlanganisela kudalwa ngokujova okuhlanganisiwe kukhiye we-silicone obekwe ngqo emlonyeni wesiguli.
Inzuzo enkulu yale nqubo ukuthi ukubuyiselwa kungaqalwa kwenziwa nge-wax kwimodeli yamatshe, bese kukopishwa futhi kudluliselwe ngokuningiliziwe emazinyweni emvelo.
Sisebenzisa iLeica Microscope yethu enamandla sikhomba futhi sihlukanise zonke izinkinga ezinyweni ezithintekile emifantwini ebonakalayo nokubola kuye ekushintsheni kwezinwele okuncane kakhulu ukulungiselela ukulungiswa kwezinyo nokusetshenziswa kwe-resin.
Imiphumela iyazikhulumela 🦷
Ngeminye imininingwane yokwelashwa kwethu kwe-ABC nokuthi ukubopha okuhlanganisiwe kungayilungisa kanjani incwadi yakho yokumamatheka ukubonisana kwamavidiyo wamahhala namuhla nodokotela wamazinyo wakwa-OptiSmile.
Ngaphezu kwalokho, yonke imishanguzo ayinasifo futhi ayinazinhlungu. Akudingi ukulungiswa kwamazinyo akho ngaphambi kwenqubo. Empeleni inqubo yokwengeza.
Ukuba ne-Laminated Composite Veneers kuhilela inqubo elula kuphela yamazinyo wezimonyo osebenzisa mahhala i-resin eyinhlanganisela emazinyweni akho.
- Okushiwo Iziguli Zethu -
Ithimba lakwa-OptiSmile lalingelutho kodwa belisebenza ngokuzikhandla ukuze liphendule yonke imibuzo yami ngesineke nangokwethembeka. Basebenzisa ubuchwepheshe obusesikhathini kakhulu futhi bahle ngokwedlulele nakwenzayo.
Ngaso sonke isikhathi nganginolwazi oluhle noDkt Yudelman noDkt Harris, bonke abanye abasebenzi. Kuzwakala sengathi bayabakhathalela ngokweqiniso futhi bafuna ukusiza, hhayi nje ukwenza umsebenzi.
Bengiyethemba futhi ngiyazisa imibono yabo. Ngingancoma impela i-OptiSmile.
Ngincome iziguli ezi-3 ku-OptiSmile ngenxa yomsebenzi onobungani nomsebenzi wochwepheshe. Insiza enobungani nephumelelayo lapho wazi kahle ukuthi kwenzekani ngamazinyo akho! Sicela ungayi kwenye indawo ngaphandle kwe-OptiSmile.
Ukugcwalisa leli fomu kuzokusa ekhasini lethu lokulanda izintengo
Finyelela Ikhasi Lokulanda Intengo